Fanatanjahantena · Aogositra, 2008 · Global Voices teny Malagasy
Fanatanjahantena · Aogositra, 2008
Tantara mikasika ny Fanatanjahantena tamin'ny Aogositra, 2008
Nampiasa orana vitan'olombelona ny governemanta ao Beijing tamin'ny lalao olympika mba hahatsara ny andro tamin'ny lanonam-panokafana sy famaranana ny lalao. Tokony nilaza mialoha tamin'ny mponina ny governemanta, hoy i Lui Li rehetra nanana hevitra hanova ny toetr'andro tahaka izany.
Libanona : Ny lalao olympika ao Beijing
Tselatra · Libanona19 Aogositra 2008
Na dia kely aza ny fandraisana anjaran'ireo Libaney amin'ny lalao Olympika any Beijing, dia tsara marihina fa in-dray mandeha ihany no tsy nanana solo-tena tamin'ny lalao Olympika i Libanona hatramin'ny 1948. Ny fandraisan'anjaran'i Libanona amin'ity lalao ity no resahin'i Ajnabiya ao amin'ny lahatsorany farany.
Tselatra · Fivavahana19 Aogositra 2008
Kazakhstan19 Aogositra 2008
Slovakia : Mandrefy medaly Olympika
Tselatra · Slovakia18 Aogositra 2008
Araka ny kajikajy nataon'i Margarete, avy ao amin'ny The foreigner's guide to living in Slovakia dia fahafolo i Slovakia amin'ny isan'ny medaly isan'olona tamin'ny lalao Olympika, raha i Slovenia no voalohany.
Brazil : Antsika ny Alimo
Tselatra · Amerika Latina18 Aogositra 2008
Nisy nanokatra blaogy vaovao : Bronze Brasil 2008 ho fananihaniana ny vokatra azon'ireo atleta Braziliana tamin'ny lalao Olympika ao Beijin. “Toa rava tanteraka ny nofinofintsika handresy ny record amin'ny lalao Olympika noho izao fahazoantsika ny medaly alimo faha-5 izao. Medaly alimo 5. Andro 6 no nilalaovana. Mety ho tanteraka ny...
Shina18 Aogositra 2008
Tselatra · Shina12 Aogositra 2008